Taageerayaasha Barcelona oo la kulmay war naxdin leh ee ku aadan Lionel Messi – Gool FM
Taageerayaasha Barcelona oo la kulmay war naxdin leh ee ku aadan Lionel Messi
Dajiye August 21, 2019
(Spain) 21 Agoosto 2019. Jamaahiirta kooxda Barcelona ayaa waxay heleen war naxdin leh, kaasoo ku aadan kabtankooda Lionel Messi.
Tababarka ay Barcelona maanta oo Arbaco ah ugu diyaar garoobeysay kulanka soo aadan ee Real Betis ayaa waxaa ka maqnaa Lionel Messi, sababa la xiriira inuusan wali ka soo kabsanin dhaawacii uu qabay.
Barcelona ayaa sii wadaysa isku diyaarinta kulankeeda labaad ay ka ciyaari doonto horyaalka La Liga sabtida soo aadan, xili ay ka maqan yihiin xiddigo badan oo muhiim ah sida Luis Suarez iyo Ousmane Dembele.
Lionel Messi ayaa seegay tababarka guud maanta ee kooxda Barcelona, sababa la xiriira inuusan wali ka soo kabsanin dhaawacii uu ka qabay dhanka kubka ee lugtiisa, kahor inta uusan u safrin Mareykanka, halkaasoo uu tababar ku sameenayo isaga kaligiis, waxaana wali shaki la galinayaa ka qeyb galkiisa kulanka soo aadan ee Real Betis.
Ousmane Dembele ayaa isna ku biiray liiska xiddigaha ka dhaawacan Barcelona, kaddib markii uu Isniintii soo gaaray dhaawac dhanka muraqa ee lugta bidix, wuxuuna garoomada ka maqnaan doonaa mudo dhan 5 isbuuc ah.
“Dembele wuu sii joogi doonaa Barcelona inkastoo ay jiraan dalabyo badan oo ka yimid kooxo waa weyn” – Wakiilkiisa
Jadon Sancho, Fernando Llorente iyo Christian Pulisic oo ugu waa weyn wararka suuqa kala iibsiga ee kooxda Manchester United